भ्रष्टाचारीद्धारा कांग्रेस सर्लाहीको सभापतिको उम्मेदवारी
कमलामाई खबर सम्वाददाता प्रकाशित: २०७८-११-२० गते ३६१ पटक हेरिएको
मधेस प्रदेसको सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको छ । संस्थापन र इतर समूहको जुधाइका कारण सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनसमेत प्रभावित भएको छ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत सर्लाहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा विवाद बल्झिँदै गएपछि वडा अधिवेशनदेखि जिल्ला अधिवेशनसम्म प्रभावित भएको छ ।
सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.अमेरसकुमार सिंहको क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी विवाद देखिएको छ । सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेस सभा सदस्य रहेका वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेश सिंह विच जुँघाको लडाई हँुदा नेपाली कांग्रेस सर्लाहीको जिल्ला अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ । डा. अमरेस शेखर कोइराला निकट हुन् भने वीरेन्द्र संस्थापननिकट मानिन्छन् । १४ औं महाधिवेशनका लागि भएको क्षेत्रीय अधिवेशनमा वीरेन्द्रले प्रतिनिधि सभा सदस्य डा.अमरेसलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट हराएका थिए ।
डा.अमरेशविरूद्ध खुलेर लागेका वीरेन्द्रको पूरै प्यानल क्षेत्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट एकलौटी निर्वाचित भएको थियो। संस्थापननिकट वीरेन्द्र र इतरपक्षका डा.अमेरसबीचको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण अधिवेशनका क्रममा सो क्षेत्रमा पटक पटक विवाद देखिएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् ।
दुई ‘सिंह’ बीचको जुधाइका कारण क्षेत्र नम्बर ४ मा स्थगित भएको बलरा गाउँपालिकाको वडा अधिवेशन बिहीबार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला अधिवेशनका लागि मनोयन दर्ता हुन दुई दिनबाँकी हुँदा दुईवटा वडाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका नेता सुरेन्द्र कुमार न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार दुई वडाको वडा अधिवेशन सम्पन्न भएपछि पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको सर्लाहीको जिल्ला अधिवेशन फागुन १५,२० हुँदै २३ गते गर्नेतयारी भएकोछ । सो अधिवेशनका लागि जिल्ला सभापतिका लागि दुईजनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
कोइराला प्यानलबाट पूर्वसभापति लक्ष्मण राय र संस्थापन पक्षबाट बहालवाला उपसभापति सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका कांग्रेस सर्लाहीले जनाएको छ । सभापतिका लागि उम्मेदवार घोषणा गरेका बहालवाला उपसभापति सुरेन्द्र नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका उपसभापति वीरेन्द्रका दाइ हुन्। ठेकेदारीबाट राजनीतिमा आएका सुरेन्द्रलाई आफू सभापति हुँदा रायले नै पहिलोपटक जिल्ला उपसभापति बनाएका थिए। अघिल्लो अधिवेशनमा राय र नागेन्द्रकुमार रायबीच पार्टी सभापतिका लागि चुनाव हुँदा उनी लक्ष्मणकै पक्षमा रहेका थिए। तर, चुनाव नागेन्द्रकुमारले जितेपछि सुरेन्द्र उतै लागेर दोस्रोपटक मनोनित भएका हुन ।
गत चुनावसम्म डा.अमरेसलाई जिताउन सक्रिय रहेका सुरेन्द्रका लागि शक्ति आर्जन गर्न गुट परिवर्तन गर्नु सामान्य कुरा रहेको सर्लाही कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन् । संस्थापन निकट भएकोले स्वतः शक्तिशाली देखिए पनि उनको व्यवसायिक पृष्ठभूमि स्वच्छ नरहेको नेताहरूको आरोप छ। ठेकेदारी गरेर पैसा र सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गरेका सुरेन्द्रमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको छ । सर्लाहीको मानपुर ब्यारेज नहरको अध्यक्ष छँदा सिसमको रूख कटान गरेर सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उनलाई दोषि ठहर गरेको छ।
‘२०५० सालमा उनी मानपुर व्यारेज निर्माण समितिको अध्यक्ष रहेको समयमा मानपुरदेखि हरकठवासम्मको रूख कटान गरेको आरोपमा अख्तियारले चलाएको मुद्दामा उनी दोषी देखिएका छन् ।’ सर्लाही कांग्रेसका एक नेताका अनुसार‘त्यो मुद्दामा उनले पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका भएपनि उनि अहिले पनि तारेखमै रहेका छन् ।’
रूख कटानबाहेक अन्य निर्माणसम्बन्धी उनले गरेका कामहरू कमसल रहेको ती नेताको आरोप छ । नयाँ रोडदेखि मधुवनी सम्मको सडक निर्माण गर्दा कमसल काम गरेर उनले भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । ‘नयाँ रोडदेखि मधुवनी सम्मको सडक निर्माणका लागि अरूले ठेक्का पाए पनि उनले पेटी कन्ट्र्याक्ट लिएका र कमसल काम गरेका भन्दै उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको’ ती नेताले बताए ।
धनकौल गाउँपालिका ५ स्थित जनता माविको हरकठवाको भवन निर्माणको ठेक्का पाएका सरेन्द्रले त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले सर्लाहीमा अवैध क्रसर उद्योगका साथै गैर कानुनी मदिरा उद्योगसमेत सञ्चालन गरेका छन्।
सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. अमरेसको पत्तासाफ गर्ने अभियानमा जुटेका सुरेन्द्र जिल्ला सभापतिमा संस्थापनबाट उम्मेदवार हुने अवसर जुटेपछि तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराखी जुटेका छन् । भाइ प्रदेस उपसभापति एवम मधेश प्रदेश सरकारका महिला,बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएकाले स्थानीय चुनावमा टिकट दिने भनेर धेरैलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भएको इतर समूहका एक नेताको आरोप छ ।